काठमाडौं । ट्याङकर चालकको हडतालका कारण उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थमा अभाव देखा परेको छ । दुई दिन देखी आम हडतालमा उत्रेका चालकहरुले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्दा अभाव सिर्जना भएको हो । पेट्रोलियम ...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २१ असारको स्थायी समिति बैठकको एउटा एजेण्डा थियो–सरकारको कामको समीक्षा । सो बैठकमा समीक्षा पनि सुरु भयो । तर, अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले सोचे अनुसारको समी...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भदौ ९ गते बोलाइयो । तर, भदौ २१ गतेका लागि बैठक सारियो । त्यो बैठक पनि स्थगित गरेर २८ भदौमा बोलाइयो । कार्यसम्पादन र निर्वाचन समिति गठन लगायतका...
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज भव्यताको साथ मनाइएको छ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिवपार्वतीको पूजा र उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । यो व्रत ग...
काठमाडौँ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका आ–आफ्नै सीमा र कर्तव्य छन् । कतिपय विषय संविधानमै स्पष्ट गरिएका छन् भने कतिपय विषय कानुनद्वारा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । तर, ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा समिकरण फेरबदल भएको छ । महामन्त्री शसांक कोइराला सभापति देउवालाई छाडेर सिटौला समुहको नजिक पुगेका छन् । तर उनी सिटौलालाई भन्दा आफु त्यो समुहको नेता हुनेगरि रणनीतिमा लागेका छ...
काठमाडौँ । शिक्षा अभियन्ता उत्तम सञ्जेलले ३०० रुपैयाँमा आफ्नो बिहे सकाएका छन् । ४१ वर्षको उमेरमा उत्तमले गुहेश्वरी मन्दिरमा अत्यन्त साधारण तरिकाले सोमबार बिहे गरेका हुन् । बेहुली सुन्दरीजलकी कला अधिका...
संसदमा प्रश्नोत्तरः ५ प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा कहिले ?
काठमाडौँ । ‘आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध कहिलेसम्म उपलब्ध गराइन्छ ?...
नाकाबन्दीको जस्तै बिम्स्टेकको सास्ती
काठमाडौं । सरस्वती रावललाई बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरमा पुग्नुपर्ने थियो । नियमित भइरहने भत्तपुर सडकको जामलाई ध्यानमा राखेर उनी ९ बजे नै भत्तपुर बाल्कोटबाट हिडेकी पनि हुन । तर दिउँसो १२ बजेसम्म पनि उन...
पाँच बर्षसम्म अध्ययन गरेर पनि फ्रेन्च कम्पनीले अनुमति पाएन स्मेक र थ्री गज्रेजले बन्धक बनाए । नेपाल सरकार र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका बीचमा सात वर्ष भित्रमा ७५० मेगावाटको पश्चिम स...
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने ‘पोहोर मरी सासु, अहिले आयो आँशु’
विचार गरेर मात्र आरोप लगाऔँ, पछि नातीनातिनीले हजुरबा, हजुरआमा यस्तो के भन्नुभएको भन्दा आफैँलाई अप्ठ्यारो होला ! काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपराधिक घटनामा सम्लग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही ...
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूको गाइजात्रे श्राद्ध !
काठमाडौँ । गाईजात्राको दिन व्यांग्यात्मक विरोध स्वरुप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूको गाइजात्रे श्राद्ध गरिएको छ । स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको नाममा राकेशकुमार शर्माले वीर अस्पताल अगाडि श्राद्...
काठमाडौं । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको नयाँ रहस्य खुल्न थालेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ परेको दीलिपसिंह बिष्ट बलात्कार र हत्यामा संलग्न नदेखिएको पाइएको छ । उच्चस्रोतका अनुसार दिदी बहिनी ...
कांग्रेसको विवाद छताछुल्ल, पौडेल पक्षद्वारा बैठक बहिस्कार
काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गएपनि देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस भने अझै संघीयतामा प्रवेश गरेको छैन् । कांग्रेसका तत्कालिन सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला संघी...
शारीरिक सम्पर्क भएर गर्भ रहेमा स्वतः विवाह
काठमाडौं । केटा र केटीबीच शारीरिक सम्पर्क भएर गर्भ रहेमा स्वतः विवाहमा परिणत हुने भएको छ । राजीखुसीको सम्पर्कमा महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह ...
प्रदेश-३ को राजधानी बनेपा सार्ने तयारी, यस्तो छ भित्री छलफल
काठमाडौं । प्रदेश-३ को स्थायी राजधानी हेटौडाबाट सार्ने गरि उच्च तहमा छलफल सुरु भएको छ । भूगोल र संरचनाका हिसावले हेटौडामा राजधानी उपयुक्त नदेखिएको भन्दै सार्ने विषयमा राजनीतिकतहमा छलफल सुरु भएको छ । ...
देउवाले असहमति जनाए यसरी सिफारिस हुनेछ नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । न्यायपरिषद्ले जोशीको नामसँगै सर्वोच्चका न्यायाधी...
नेमकिपाद्वारा १७ राष्ट्रिय र ५ अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित, ओली सरकारप्रति खेद प्रकट
काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सरकारले भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण नगरेको, निर्माण कार्यका ठेकेदारहरुलाई समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगराएको, सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ नगरेको...
देशभरको मौसम बदली, भारी बर्षाकाे सम्भावना रहेकाले सचेत रहन मौसमविदकाे आग्रह
काठमाडौं। आज देशभरको मौसम बदली हुनुका साथै भारी बर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमबिदहरुले जनाएका छन् । आइतबार रातिदेखि लगातार भर्इरहेकाे बर्षा आज दिनभरी नै हुने सम्भावना रहेकाे जल तथा मौसम पूर्वानुमान ...
मोदीले समय नदिदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको गोप्य प्रतिवेदन ‘अलपत्र’
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)लाई समय दिएका छैनन । प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिदा बुझाउन ठीक्क पारेको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ दुई वर्षको छलफलपछि तयार...